Nnukwu ụgbọ oloko agbachiri azụ na Czech Republic - RayHaber
HomeỤWAEurope420 Czech RepublicWayo A tụchiri ụgbọ oloko agbachitere na Czech Republic
02 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 420 Czech Republic, Europe, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, VIDEO 0
oge mgbe yuk train derails
Na Czech Republic, ụgbọ okporo ígwè lime ahụ mebiri emebi ma gbatuo ya. E biputere foto nke oge ụgbọ oloko ahụ.
Ihe ọghọm ahụ mere na usoro 29 dị nso n'obodo Marianske Lazne na Karlovy Vary na July, n'oge 16.30. Ckedgbọ okporo ụzọ na-apụta site n'ụgbọ okporo ụzọ ahụ ka a kụrụ ebe a na-eche igbe; Egbughị ma ọ bụ merụọ ihe mberede ahụ.
Nchọpụta banyere ihe kpatara ihe mberede ahụ, ọ nwere ike ịbụ na onye na-arụ igwe nwere ike karịa ịgba ọsọ, kwuru.
Na ihe ọghọm ahụ, ụgbọ ala 13 ụgbọ oloko ahụ kwụgoro; 1 nde 200 puku euro na ụgbọ oloko ahụ n'ihi ihe mberede ahụ mebiri ihe.
Ngwá Ọrụ Na-azụ Ọkụ Na-agagharị na Adana Pozantı 10 / 01 / 2018 Ọ bụ ezie na ụgbọ ala ndị a na-ejikọta ọkụ na ụgbọ okporo ígwè nke TCDD Taşımacılık A.ş. na mpaghara Adana si Pozantı gafere ebe a na-egwu egwu na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, ha na-agbapụ n'ihi ihe a na-amaghị ama. Site na mkpọda ụgbọ ala, na-ebu ụgbọ elu ụgbọ okporo ígwè na Pozantı-Adana-Ulukışla ọ kwụsịrị. Mgbe ihe merenụ gasịrị, e zigara ìgwè TCDD gaa na saịtị mberede ma malite iwepu ụgbọ ala ndị a tụbara n'okporo ụzọ ụgbọ oloko ahụ. Ndị na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ TCDD malitekwara ịrụzi ụgbọ oloko ahụ mebiri emebi. N'ihi ọrụ siri ike nke ndị ọrụ TCDD, ọbụna ọrụ ụgbọ oloko ndị e mechiri ka ụgbọ njem malitezie ịchịkwa. Ọ bụ ezie na e gburu mberede ma merụọ ahụ, e mere nchọpụta ahụ.
Nnukwu Ugbo Eji Ibu Ugbo Overturned Highway Cotton Bale Jupụta 04 / 03 / 2015 Ugbo Eji Eji Ugbo Overturned Highway Cotton Bale Ejupụta: Aydın-İzmir Highway Muğla exit enweghị ike iwepụ ụda nke ụgbọala na-atụkwasị na owu. Aydın-İzmir Highway Muğla apụ apụghị ịdọrọ ikpere gbagwojuru owu. A na-agbasasị obere beles, nke ọ bụla na-atụle ịdị arọ nke 250 Kg, site na ụgbọala TIR na ụgbọala na ubi. Onye ọkwọ ụgbọala TIR anwụghị na mberede ahụ. Ihe mberede ahụ mere mgbe ọpụpụ nke Aydın-İzmir Motorway Muğla. Murat Akit na eji ejiji 42 YU 905 TIR na-ejikọta 42 YU 450 na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie, na-agbagwo agbagọ. A na-atụgharị mita ndị na-ebu owu na-atụgharị ya na okporo ụzọ na ala. Site na TIR na-agagharị n'okporo ụzọ okporo ụzọ
Çerkezköy Silivri dị n'agbata Ugbo Ejiri Ejiri Ejiri Ejiri Eji Axle Breaked 13 / 04 / 2019 Çerkezköy-Silivri n'etiti ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè gbajiri. N'ịchọpụta na a gbajiri ígwè ahụ, ígwè ahụ na-akwụsịtụ ụgbọ okporo ígwè ahụ ma kwatuo ụgbọ ala ndị e ji ebu ájá. Dị ka ozi natara, 12 bụ na Eprel Fraịde na 03.00 Çerkezköy-Silivri ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti axle gbawara. N'ịbụ ndị na-enweghị ike ịghọta na a gbajiri ígwè ahụ, ígwè ahụ nọgidere na-eji axle gbawara agbawa maka ihe dịka kilomita 3. Ka oge na-aga, onye na-ahụ maka ụgbọelu ahụ hụrụ nsogbu ahụ n'ime ụgbọ ala ahụ. N'ime ihe merenụ, e kwaturu otu n'ime ụgbọ ala ndị e ji ebu ájá. A mụtara na Turkish State Railways (TCDD) malitere nyocha ihe mere.
Mkpebi nke Ogologo Ogologo oge iji kwusi mmebi nke Report EIA 29 / 11 / 2013 Mkpebi Limestone Quarry Dec to Stop Execution in the EIA Report: 1 Kocael. Ụlọikpe Nlekọta ahụ kwụsịrị imebi akụkọ EIA nke e nyere maka ebe a na-emepụta ebe a na-emepụta ebe a na-eme ihe na steeti nke Kartepe nke Kocaeli iji nye ihe onwunwe n'ọdụ ụgbọ oloko dị elu (YHT). Akpadoro ikpe megide Ministụ nke Gburugburu Ebe Obibi na obodo obodo maka mkpochapu mkpebi megide Ministri nke gburugburu ebe obibi na obodo ndi ozo nke Kartepe Tourism Association di na Maşukiye bu na o deputara ozi EIA maka ulo oru nchikota nke ulo oru nchikota na ulo mkpocha bu nke atumatu TCDD General Directorate ji eme ihe. Ụlọikpe ahụ agaghị aga nzukọ kwesịrị ekwesị na òkè ndị ọha na eze na-arụ, nke a
Ntụle na-atụ egwu: Nrụpụta nke ọdọ mmiri na-amịkọrọ ihe na-asọ oyi Sludge Pool (TUDEMSAS) 23 / 03 / 2015 Construction of Waste Wayo sludge Pool Turkish ụgbọ okporo ígwè ígwè ọrụ ụlọ ọrụ INC (TÜDEMSAŞ) IHU OZI OWU OWU OWU OZU OZU AHU AHU AHU AHU OZU OZU OZU dika oru 4734 nke Iwu Nwuputa Ulo Oha 19. E nyere nkọwa zuru ezu maka obi dị n'okpuru. Ndebanye aha Ndebanye aha: 2015 / 29812 1-a) Adreesị nke Njikọ Nkwekọrịta: KADI BURHANETTIN MAH. 58059 SİVAS HEAD OFFICE / SİVAS b) Nọmba ekwentị na nọmba fax: 3462251818 / 4699 - 3462235051 c) Adreesị ozi-e: tender@tudemsas.gov.tr ​​ç) Adreesị weebụ ebe akwụkwọ nwere ike ịdị na-ele: https://ekap.kik.gov.tr/ EKAP / 2-a) Ụdị, ụdị na ọtụtụ nke ọrụ ndị dị nro:
Ntụle na-atụ egwu: Acetylene n'efu lime nyo pịa bench ga-zụrụ (TÜDEMSAŞ) 26 / 10 / 2015 Turkish ụgbọ okporo ígwè ígwè ọrụ ụlọ ọrụ INC Acetylene n'efu lime nyo pịa igwe ga-zụrụ Turkish ụgbọ okporo ígwè ígwè ọrụ ụlọ ọrụ INC (TÜDEMSAŞ) Ndebanye aha Ndebanye aha: 2015 / 143715 Aha nke Ọrụ: Acetylene Egwuregwu Egwuregwu Epeepe Mpempe akwụkwọ Ụdị Ụdị - Usoro: Ịkwado Ngwaahịa - Mepee Usoro Ntuziaka 1 - Nchịkwa a) Adreesị: KADI BURHANETTIN MAH. 58059 b) Nọmba ekwentị na nọmba faksị: 3462251818 - 3462235051 c) Adreesị ozi-e: tender@tudemsas.gov.tr ​​ç) Adreesị ozi-e ebe a nwere ike ịhụ akwụkwọ nchịkwa / nke mmemme: www.tudemsas.gov.tr ​​2 - a) Nature nke ngwaahịa ndị dị nro , ụdị na ibu ...
Ụgbọ okporo ígwè ndị a na-ere ọkụ ọkụ na Belgium (Video) 06 / 05 / 2013 Onye Belgium na-agba ọkụ ọkụ ọkụ na-ere ọkụ na Belgium. Wetteren obodo nke ụgbọ okporo ígwè jupụtara na mmiri n'oge mgbawa nke ọkụ n'oge mgbawa nke 1 ndị mmadụ gburu na merụrụ ahụ na 33 mmadụ. Ndị ọchịchị, ihe ahụ merenụ ahụbeghị otú nnyocha ahụ si aga n'ihu, o kwuru. Ihe omume na oge oge 02.30 mere mgbe ha na-ebu ụgbọ ala si na Netherlands. A na-anapụta okporo ígwè Dutch nke ụgbọ okporo ígwè na-eburu ihe ndị ahụ na Germany mgbe ihe ahụ merenụ gasịrị, ndị ọchịchị kwuru na ndị ahụ merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ bụ ndị gbakwunyere iji chekwaa ígwè ọrụ ahụ. Ndị ọchịchị kwuru na n'oge ahụ, 1 anwụọla na ihe karịrị 30 e merụrụ ahụ. Belgium ...
Ejiri Ọkụ Na-agba Ọkụ Na USA 31 / 12 / 2013 Ngwongwo Ejiri Mmanụ Ejiri Na US: Na United States, nkwụsị nke ọrụ mmanu na-ekpuchi elu igwe site na mgbawa nke ụgbọ okporo ígwè ahụ. Anwụrụ ọkụ kpuchiri elu igwe. BNSF okporo ụzọ na-akọwa ihe mberede ahụ SözcüAmy McBeth kwuru na otu ụgbọ okporo ígwè a kwụnyere n'ụgbọ okporo ígwè na-esote na ihe mberede ahụ mere n'ihi ụgbọala 106 na mmanụ a na-ejikarị na ya kụrụ ụgbọ okporo ígwè ahụ. Ogologo oge 2 na ihe mgbawa na ihe mberede ...
Ụgbọ okporo ígwè mmanụ ahụ rutere na US (Video) 17 / 02 / 2015 Ụgbọ okporo ígwè mmanụ na-ada na United States: Na West Virginia, ụgbọ okporo ígwè a na-ejupụta mmanụ na-eme ka ọ dị ọcha. Ma ọ dịkarịa ala, ụgbọ elu 10 dabere na ụgbọ okporo ígwè ndị ụgbọ okporo ígwè kụrụ. Obodo Kanawha na Fayette, gụnyere ebe obibi nke ihe mberede ahụ mere na ọnọdụ nke gosipụtara na igwe foto amateur. Ndi gomenti kwuru na eburu obodo ndi ozo; mara ọkwa na a na-emeso onye ọ bụla emetụtaghị anwụrụ ọkụ. N'ime ihe merenụ, otu ụlọ dị nso n'ebe ahụ nke ihe mberede ahụ laghachiri na ntụ n'okpuru ndu ọkụ. Ụgbọ okporo ígwè ahụ na-ebu ụgbọ ala 109 si North Dakota ka Yorktown. Ọkụ na saịtị mberede n'okpuru oké snow ...
ụgbọ oloko na-ebu ibu
Eragbọ okporo Ugbọ
Ngwá Ọrụ Na-azụ Ọkụ Na-agagharị na Adana Pozantı
Nnukwu Ugbo Eji Ibu Ugbo Overturned Highway Cotton Bale Jupụta
Mkpebi nke Ogologo Ogologo oge iji kwusi mmebi nke Report EIA
Ntụle na-atụ egwu: Nrụpụta nke ọdọ mmiri na-amịkọrọ ihe na-asọ oyi Sludge Pool (TUDEMSAS)
Ntụle na-atụ egwu: Acetylene n'efu lime nyo pịa bench ga-zụrụ (TÜDEMSAŞ)
Ụgbọ okporo ígwè ndị a na-ere ọkụ ọkụ na Belgium (Video)
Ejiri Ọkụ Na-agba Ọkụ Na USA
Ụgbọ okporo ígwè mmanụ ahụ rutere na US (Video)